Ahoana ny fampiasana Dropbox amin'ny Xfce (Thunar) | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fampiasana Dropbox amin'ny Xfce (Thunar)
Pavloco | | Fisehoana / personalization, fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Mpampiasa maro an'ny XFCE nilaozana isika talohan'ny fizahan-tavan'ireo serivisy sasantsasany, amin'ny alàlan'ny tontolon'ny birao hafa. Soa ihany, ny fokonolona dia mahavariana ary manararaotra manararaotra ny sembana rehetra hanehoana izay nanaovana azy.
Ohatra mazava io, Dropbox tsy mitambatra afa-tsy amin'ny Nautilus, ilay tetikasa Mpitantana rakitra GNOME. Na izany aza, nisy vahaolana tsara nipoitra izay zaraina aminay avy amin'ilay pejy WEB UPD8.
1 1. Atsofohy DROPBOX
2 2. ATSORO NY DROPBOX TRANONDRO THUNAR AO XFCE
1. Atsofohy DROPBOX
Ny zavatra voalohany sy atolotray indrindra dia ny famoronana kaonty Dropbox teo aloha. Raha te hanampy ny Pavloco Foundation (ny tiako holazaina XD) hahazoana toerana malalaka fanampiny dia azonao atao ny misoratra anarana eto. Manome habaka 2gb anao ny kaonty maimaim-poana.
Aorian'ny famoronana ny kaonty dia apetrakay Dropbox for Linux (tsy misy fiankinan-doha amin'i Nautilus). Azo atao avy amin'ny Repositories an'ny Ubuntu (sudo apt-mahazo mametraka nautilus-dropbox) ary misy aza a Fonosana Debian amin'ny pejy ofisialy, fa izaho Manoro hevitra ny hametraka azy amin'ny fomba manaraka ahosatria hita fa mandeha amin'ny diso sy dikanteny rehetra.
Para 32 bit manatanteraka ao amin'ny Terminal izahay:
Para 64 bit manatanteraka izahay:
Manaraka izany dia mihazakazaka ny daomy Dropbox avy amin'ny fampirimana .dropbox-dist vao noforonina miaraka amin'i:
Raha mihazakazaka ianao Dropbox amin'ny solosainao amin'ny voalohany, araho ny torolàlana omen'ny programa fametrahana anao. Vantany vao manao izany ianao dia hoforonina ao amin'ny lahatahiry lehibe ny fampirimana "Dropbox".
Vantany vao vita izany ary raha tiantsika ny mihazakazaka Dropbox rehefa Login dia mankany Menu »Fikirakirana» Mpitantana fikirakira »Session ary manomboka. Andao hankany amin'ny kiheba "Fampiharana fanombohana mandeha ho azy" ary mifidy isika "Ampio".
Manampy ireto masontsivana manaraka ireto izahay:
DESCRIPTION: (avelantsika banga izany)
DIDY: / home / (ny anaranao) /. dropbox-dist / dropboxd
Tsindrio ianao OK.
2. ATSORO NY DROPBOX TRANONDRO THUNAR AO XFCE
Hatreto dia ny hany zavatra izay ataon'i Dropbox ao amin'ny rafitray miaraka amin'ny XFCE dia ny fampifanarahana ireo rakitra, fa raha te hanana ireo fiasa miseho isika rehefa manindry ny bokotra faharoa amin'ny folder «Dropbox» dia mila mampiasa plugin fotsiny isika DROPBOX TUNAR.
Ny Crunchbang distro dia mitondra fonosana .deb vitsivitsy izay miasa tanteraka ao amin'ny Xubuntu 12.04 (ary tokony hiara-miasa amin'i Debian) eto ireo fisintomana.
Etsy ankilany, mpampiasa ny andohalambo azon'izy ireo atao ny mametraka azy avy amin'ny tahiry AUR
Raha tsy mahasoa anao ireo fonosana ireo dia azonao atao ny manandrana manangona ny Source Code manaraka ny torolalana omena eto.
Mazava ho azy fa fantatro fa misy serivisy maimaimpoana hafa mitovy amin'ny Dropbox, saingy fantatra tsara fa tsy mandratra velively ny fahalalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ahoana ny fampiasana Dropbox amin'ny Xfce (Thunar)
Diso ny bokotra fampidinana.
Fialan-tsiny, amin'izao fotoana izao tsy vitako ny mamaha azy, fa amin'ny pejy izay asehoko ho loharano dia azonao atao ny mahita ilay misintona.
Ity no rohy ho an'ny Package .deb 32 bit
Ity dia ho an'ny 64 bit
Cris Nepita dia hoy izy:
Azoko fantarina ve hoe inona izany loharano izany? 😛
Valiny tamin'i Cris Nepita
Nantsoina hoe nofy Caviar izy io
Hmmm, matetika tsy mampiasa serivisy rahona aho fa tsara be io 🙂
[tsipelina taliban amin'ny fomba]
Azafady, amin'ny teboka faha-2 marina INATALAR amin'ny fametrahana
[tsy mandeha ny tsipelina taliban]
Ho an'ny ambiny, tutto tsara 😉
kronos dia hoy izy:
Vao nitady an'io aho 🙂
Mamaly ny kronos
Manontany ny iray ary mamela ny tsy fahalalana aho ..
Inona no ilana an'i Dropbox?
Izy io dia rafitra iray hampiantranoana sy handrindrana ireo antontan-taratasy ao anaty rahona.
@Pavloco Misaotra betsaka tamin'ny fampianarana. Azafady, inona ny anaran'ilay Fonte nampiasanao tamin'ny fisamborana anao?
Misaotra betsaka anao, zavatra kely iray ampiasako an'i Marlin, satria ity dia nanana ny fanohanana Dropbox, lasa zatra Thunar bebe kokoa aho, mbola miandry ny andro handinihan'ny mpandrindra Xfce ihany ary handinihany ny takelaka sy faly.
aldobelus dia hoy izy:
Salama pavloco. Azafady, inona ireo fiasa izay miseho rehefa tsindrio havanana eo amin'ny fampirimana "Dropbox" aho? Tsy mbola namboariko Dropbox talohan'izay, manana plugin thunar napetraka aho fa tsy fantatro izay tokony ho hitako rehefa manindry ny bokotra aho, inona no aseho. Efa nanamarina aho fa mandeha ilay rindranasa saingy ireo fiasa ireo… dia nanitikitika ahy ianao! Misaotra tamin'ny fampianarana. Miasa tsara amin'ny Manjaro 0.8.3! (Na dia nametraka Dropbox voalohany avy tany AUR aza aho, ary koa ny plugin ho an'ny Thunar, tsy noforonina ny fampirimana raha tsy niditra ny baikonao aho. Ireo izay naseho Dropbox fotsiny dia manisa an'i Nautilus ary mampiasa XfCE, Thunar "alors"). Saludines (avy any Cantabria aho, inona no hataontsika ...)
Mamaly an'i aldobelus
Ny menio rehefa manindry ny bokotra faharoa dia tokony hampiseho aminao ny menio misy boaty manga toy ny sarin'ny paositra. Miala tsiny fa tara amin'ny famaliana. Manantena aho fa hitodika ianao ary hamaky azy io 🙂
Maherin'ny 5 taona mampiasa GNU / Linux
Fivoarana ny birao KZKG ^ Gaara ao anatin'izay 4 taona izay amin'ny Linux